ဒီခရီးစဉ်အီတလီ၏ကျယ်ပြန့်အေိမျမြားကိုမြင်, ဒါဟာနိုင်ငံရဲ့ Boot တက်၏အစွန်အဖျားမှမီလန်ကနေလမ်းအပေါင်းတို့ကိုသင်ကြာအဖြစ်. လမ်းတစ်လျှောက်, သငျသညျကမ်းရိုးတန်းနှင့် Tuscany ၏တောင်ကုန်းကျယ်ပြန့် vistas ရပါလိမ့်မယ်. ဤသူကားအ, ဒါပေါ့, ရောမတို့၏စကျင်ကျောက်ရုပ်ထုများနှင့်၎င်း၏သမိုင်းအပြင်.
ဤသည်ကျော်ကြားသော routing ကိုတစ်ပတ်ကိုခြောက်ကြိမ်ပြေး. ထို့အပြင်ကယ်လီဒိုးနီးယားအိပ်ပျော်ကိုခေါ်, ဒီအိပ်ပျော်နေသော ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဇိမ်ခံပစ္စည်းကိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုနှင့်ရောနှောထားသည်. သငျသညျအစာကိုပါဝင်သည်ကြောင့်အပေးအယူရှာတှေ့နိုငျ, အချိုရည်, နှင့်သင်တန်း, အိပ်ပျော်နေတဲ့ cabins.
သင်သည်ဤရထားပေါ်တွင်အပြည့်အဝအိပ်ဆိုက်ကပ်ကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်ပေမယ့်, သငျသညျနေ့အချိန်ညဥ့်ရရှိနိုင်ပါရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. ဤရွေ့ကားသငျသညျညအချိန်တွင်ထွက်ခွာရန်နှင့်နံနက်ယံ၌ရောက်ရှိမည်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်နေ့ကိုလာရန်အဘို့အသက်သာစေ. non-အိပ်ပျော်ရထားနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံအတွက်, သင်ပထမတန်းစားလက်မှတ်ကြိုတင်ယူထားချင်ပါလိမ့်မယ်. ဤရွေ့ကားလက်မှတ်တွေကိုမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောအပိုအိတ်ကိုအဖြစ်တိုးမြှင့်အခွင့်အရေးနှင့်အတူ လာ., ပါဝင်သည်အစားအစာ, နှင့်ပိုပြီးပုဂ္ဂလိကအခန်းအတွေ့အကြုံကို.
တစ်လျှောက်လုံးခရီးသွားလာတဲ့အခါ ရထားနဲ့ဥရောပ သင်ရွေးချယ်မှုအတွက်လုံးဝပျက်စီးနေသည်. ဒါကြောင့်စကော့တလန်သို့မဟုတ်စပိန်ရဲ့ရှိမရှိ, နော်ဝေ, သို့မဟုတ်ဆွီဒင်နိုင်ငံ, အိပ်ပျော်ရထားသက်သာလာရန်သင့်နေ့အဘို့အဆင်သင့်နောက်တစ်နေ့နံနက်ရောက်ရှိလာဘို့န်းကျင်ကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုတချို့ရှိနေပါတယ်. သင်ရရှိနိုင်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ရှိနေစဉ်, ထိုကဲ့သို့သောရထားဟိုတယ်သို့မဟုတ်နေ့ချင်းညချင်းအိပ်ပျော်နေသောပရာ့ဂ်လေ့, ပိုလန်, လစ္စဘွန်း, သို့မဟုတ်မော်စကိုပင်, ကိုယ့်ဟာကိုယ်မျက်နှာသာမယ့်အစားဥရောပတွင်ဤခြောက်လထိပ်တန်းအိပ်ပျော်ရထားဝင်တိုက်. သင်တို့ကိုဝမ်းနည်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ထိပ်တန်း6ခရီးသွားရန်ဥရောပ၌အိပ်ပျော်နေသောရထား” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsleeper-trains-europe%2F%3Flang%3Dmy ့- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#အိပ်မက်ဆိုး ဥရောပခရီးသွား NightTrains SleeperTrains ရထားခရီးသွား